Adeegga ZAAD oo hawada ka maqan iyo Telesom oo war kasoo saartay | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Adeegga ZAAD oo hawada ka maqan iyo Telesom oo war kasoo saartay
Adeegga ZAAD oo hawada ka maqan iyo Telesom oo war kasoo saartay
Hargeysa (Dalkaan.com) – Saacadihii u dambeeyay ayaa waxaa shaqeyn waayey adeega lacag kala gudbinta ee Zaad Services, oo si weyn looga isticmaalo gudaha Somaliland, kadib cillad ku timid shirkada Telesom.
Adeega Zaad ayaa saacadaha uu hawada ka maqan yahay waxa uu saameeyay goobihii Ganacsiga, ayada oo ay isku cakirmeen kumanaan adeegaas lacago ugu jireen oo wax ku kala iibsanayey.
Sidoo kale waxa ayaduna cilladu saameysay dhanka ku hadalka (wicitaanka), kaasi oo gebi ahaanba go’an, waxaana adag in dadka isticmaala simcard-ka Telesom inay xiriir la sameeyan shirkada ama dadyow-ga kale.
Shirkada Telesom ayaa goordhoweyd raali-gelin kasoo saartay cilada saacadaha qaadatay ee illaa haddana haysata adeegyadii ugu muhiimsana ee Zaad-ka iyo ku hadalka.
“Raali Gelin! – Waxaanu ka raali galineynaa dhammaan macaamiishayada sharafta leh hakadkii ku yimid isticmaalka adeegyada Telesom. Waxaanu ku guddo jirnaa xalintii iyo cilad saaridii waxaanu iidiin balanqaadeynaa in aanu wakhti kooban ku xalineyno cilada dhacdey. Mahadsanidiin,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay maamulka Shirkada Telesom.
Shirkada si dhab ah uma sheegin waxay tahay cilada soo food saartay, ayada oo ballan-qaaday in sida ugu dhaqsaha badan u xalin doonto, si adeegyada lacag dirista iyo ku hadalka oo muhiim u ah dadweynaha dib ugu shaqeeyaan.
Adeega Zaad oo ah middka ciladiisa si weyn looga dareemay guud ahaan Somaliland, ayaa waxaa dhowr jeer oo hore uu wajahayay xatooyo kala duwan, ayada oo dhowr jeer shirkada lagu eedeyay in ay mas’uuliyad weyn iska saarin ilaalinta lacagaha dadweynaha.
Muqdisho (Caasimada Onlie) – Xildhibaan Cabdicaziz Cilmi Cali oo kamid ahaa xildhibaanada kasoo jeedo Galmudug ee kuraastooda dad kale la siiyey haddana kamid ah...
Pablo Mari oo Udinese qaab amaah u gaga soo biiray kooxda...
Wararka Suuqa kala iibsiga Caawa: Gerard Pique Youri Tielemans, Douglas Costa,...
Tottenham iyo Wolves oo heshiis ka gaaray Xidiga Traore
Halista ka dhalan karta haddii ay sii socoto carqaladeynta doorashada
Ciidamada Israel oo toogasho ku dilay wariye ka tirsan Aljazeera